တစ်ချိန်က အနုပညာရှင်တွေဆီကအလှူခံပြီး နိုင်ငံရေးလောက ကိုလှူခဲ့ဖူးတယ် အခု နိုင်ငံရေးသမားတွေဆီက အလှူခံပြီး အနုပညာရှင်တွေကိုပြန်လှူတာပါ (ဇာဂနာ)
ပြည်တွင်းသတင်း , May 29, 2020
” အတုလို.ပြောကြလွန်းလို. လာကိုင်ကြည့်ပါလို.ပြောလိုက်တာပါ “ဆိုတဲ့ Sexy Model
ပြည်တွင်းသတင်း , May 21, 2020
” အတုလို.ပြောကြလွန်းလို. ရွဲ.ပြီး လာကိုင်ကြည့်ပါလို.ပြောလိုက်တာပါ ” ဆိုတဲ့ Sexy Model သဇင်ဦး ။
ပြည်တွင်းသတင်း , May 19, 2020
Miss Golden Land Myanmar ဟန်နီချို ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် Mask ဖက်ရှင်
ပြည်တွင်းသတင်း , May 18, 2020
ပြည်တွင်းသတင်း , May 13, 2020
ကျားရဲ ငါ ====== နေပြင်းရင် နှင်းမှုန်ရင် ဆွေ့ဆွေ့ခုန် အိုက်လိုအိုက် ခိုက်ခိုက်တုန် ချမ်းလိုချမ်း အခန်းကျဉ်းကျဉ်း အလင်းမဝင် လေမဝင် နေမမြင် လမမြင် လူမမြင် သူမမြင် ထိုင်ရင်ထိုင် မထိုင်ရင်ငေး အိပ်ရင်အိပ် မအိပ်ရင်တွေး...
ပြည်တွင်းသတင်း , March 23, 2020
တေးသံရှင်ဘီလီလမင်းအေးရဲ့၂၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုမတ် လ၂၂ရက် ညနေ၄နာရီက ရန်ကုန် မြို့သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်ရှိThe Secret Spot Bar & Grill,Myanmar Sports Hotel မြက်ခင်းပြင်မှာသူမရဲ့ဖန်တွေ၊we love တွေ မီဒီယာတွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမွေးနေ့ပွဲလေးမှာလက်ဆောင်အဖြစ်ဘီလီလမင်းအေးရဲ့ပရိသတ်တွေကသိန်း၃၂၀ကျပ်တန်ဖိုး ရှိတဲ့ ဟွန်ဒိုင်း...
ပြည်တွင်းသတင်း , March 22, 2020
ပြည်တွင်းသတင်း , March 20, 2020